HappyLuck Online Sport Site ကို PAGCOR မှလိုင်စင်ရယူထားပြီး ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရမှ ထိန်းချုပ်ထားသော Dragon ဂိမ်းအုပ်စုမှ ကြီးကြပ်သည်.
၂၀၁၉တွင်စတင်တည်ထောင်ပြီး စိတ်သက်တောင့်သက်သာရှိသော အွန်လိုင်းဖျော်ဖြေမှုခံစားချက်ကို ပေးစွမ်းသည်. ထို့ပြင် ကာစတန်မာများအားလုံးအတွက် အကောင်းဆုံးသော အရည်အသွေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးနိုင်ရန်အမြဲ ထိန်းသိမ်းထားသည်.
ကျွန်ုပ်တို့အား ရွေးချယ်သင့်သည့် အကြောင်းအရင်း
နည်းပညာပိုင်းတွင် EA, KG, Betsoft နှင့်အခြား ထိပ်တန်းဖျော်ဖြေရေး စနစ်များနှင့်တွဲဖက်အလုပ်လုပ်သည်. ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အကောင်းဆုံး, အလျင်မြန်ဆုံး, အမျိုးစုံသောနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျသော ဖျော်ဖြေရေး ပလက်ဖောင်းတည်ထောင်ရန်ရည်ရွယ်သည်.
အကောင်းဆုံးသော ဈေးကွက်အခြေအနေနှင့် နောက်ဆုံးရ ဈေးကွက်သတင်း, တိကျသော ပွဲရလဒ်များကို ပေးနိုင်ရန်ကြိုးစားသွားပါမည်.
အမျိုးစုံသောဂိမ်းများအား ထောက်ပံ့ပေးသွားပါမည်. ဘောလုံးလောင်းခြင်းနှင့် လောင်းကစား ဈေးကွက်များအပြင်, စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော Live ကာစီနို, စလော့ဂိမ်းများလည်းပါဝင်သည်. တဆက်တည်းမှပဲ အကောင်းဆုံးသော အွန်လိုင်းလောင်းကစား ဖျော်ဖြေရေးအတွေ့အကြုံများရနိုင်ရန်အတွက် ဆက်လက်မွမ်းမံခြင်းနှင့်အကောင်းဆုံးသော ပစ္စည်းများကိုဆက်လက် ထည့်သွင်းသွားမည်.
HappyLuck9 သည် သင့်ထံမှ ရရှိသော အကြံပေးမှုနှင့် ဝေဖန်မှုများကို စုဆောင်းသွားပါမည်. သင့်စိတ်ကျေနပ်မှုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဉီးတည်ချက်ဖြစ်သည်.
သင့်ငွေများအတွက် လုံခြုံပြီး စိတ်ချထားနိုင်ရန်အတွက် လွယ်ကူပြီး စိတ်ချရသော ငွေပေးချေမှုများရရှိနိုင်ပါသည်. ရိုးရှင်းလွယ်ကူ၍ စိတ်ချရသော အမျိုးစုံသည့် ငွေသွင်းစနစ်များ, ငွေထုတ်စနစ်များ စီစဉ်ထားပါသည်. တောင်းဆိုမှုများကို အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးသွားပါမည်.
၂၄ နာရီ ကာစတန်မာ ဝန်ဆောင်မှု : ကျွန်ုပ်တို့ ကာစတန်မာ ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုရန်အတွက် “Live Chat” အားအသုံးပြုပေးပါ.
HappyLuck တွင်အွန်လိုင်းကစားခြင်းကိုပျော်မွေ့စေရန် ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ထိန်းသိမ်းထားရန် ကတိပြုပါသည်.
ခေတ်မီပြီး အဆင့်မြင့် ကာကွယ်ရေးစနစ်များ ဖြင့် တိကျပြီး ပြည့်စုံသော လည်ပတ်မှုများသည် သင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုလုံခြုံစွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်ရန် အာမခံပါသည်. အောက်ပါအချက်အလက်များသည် ဖောက်သည်၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်သည့် “လုံခြုံရေး ကာကွယ်ရန်စည်းမျဉ်းများ” ဖြစ်သည်
အဘယ်ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ရွေးချယ်သင့်သနည်း?
ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ရှိ အသုံးပြုသူများ၏ လုံခြုံရေးကို အလွန်ဂရုပြုပါသည်. လိုက်နာသောသူများအတွက် လုံခြုံပြီး စိတ်ချမ်းသာစရာကောင်းသော ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိုအပ်ပါသည်. ကျွန်ုပ်တို့ သင့် အချက်အလက်များကို မည်သို့အသုံးပြုမည်ကို ဖော်ပြထားသဖြင့် ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက် မူဝါဒများကို သေချာစွာ ဖတ်ရှုစေချင်ပါသည်.
အမျိုးစုံသော ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးစွမ်းနိုင်ရန်အတွက် သင့်အချက်အလက်များအား လိုအပ်ပါသည်. ဤပေါ်လစီများသည် HappyLuck အားအသုံးပြုသောအခါကောက်ယူထားသော သင့်အချက်အလက်များအား လုံခြုံစေပါသည်. Cookies နှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များလည်းထောက်ပံ့ထားပါသည်.
သင်နှင့်ပတ်သက်သော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို (ဉပမာ. အမည်, စာတိုက်လိပ်စာ, အီးမေးလ်, လိပ်စာ, အသင်းဝင်နံပါတ်, တယ်လီဖုန်း သို့ မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်, မွေးနေ့ သို့ ငွေပေးချေမှု အသေးစိတ်များ) ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုရန်အတွက် မကြာခဏ မေးနိုင်ပါသည်. ထိုအချက်အလက်များ ပေးသောအခါတိုင်း စည်းမျဉ်းများအတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားပါမည်. သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို အသုံးပြုသောအခါတွင် လက်ရှိဉပဒေနှင် အကောင်းဆုံးလိုက်လျောညီထွေရှိသွားအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်.
ဝက်ဆိုဒ်အသုံးပြုမှုများကိုလည်းစောင့်ကြည့် သွားမည်ဖြစ်ပါသည်. ထိုသို့စောင့်ကြည့်ခြင်းများတွင် သင် ဝင်ရောက်သော အကြိမ်အရေအတွက်, သင်ဝင်ကြည့်သော စာမျက်နှာများ, အသုံးပြုသူ၏ မူလအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု ဒိုမိန်း အမည်များ ပါဝင်သည်.ဆိုလိုသည်မှာ သင့်အား မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းခြင်းမပါဝင်ပါ.
သတင်းအချက်အလက် စုဆောင်းမှုနှင့် ရည်ရွယ်ချက်
HappyLuck Account ဖွင့်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်တွင် သင့်အမည်, လက်ရှိလိပ်စာ, အီးမေးလ် နှင့် လျှို့ဝှက်နံပါတ်တို့ကို သင့်အသက် အနည်းဆုံး ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီးကြောင်း သို့မဟုတ် HappyLuck အားအသုံးပြုရန် အနည်းဆုံး ၁၈ နှစ်ပြည့်ရန်လိုအပ်ကြေင်း အတည်ပြုခြင်းတို့အတွက် အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်. ထို့ပြင် ဤအချက်အလက်များသည် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အလွှဲအပြောင်း နှင့် အခြား ငွေလွှဲလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် လိုအပ်သောကြောင့် တိကျစွာ ဖြည့်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်.
HappyLuck တွင် Cookies ကိုအသုံးပြုပြီး IP address များကို ကောက်ယူပါသည်. Cookies နှင့် IP address များမှ ထောက်ပံ့ပေးသော အချက်အလက်များသည် သင့်အား ပိုမိုကောင်းမွန်သော အွန်လိုင်းအသုံးပြုမှုခံစားချက်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆိုဒ်အား အသုံးပြုသူတို့အား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ကူညီပေးနိုင်သည်. သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကိုအခြားတွင် မသုံးပဲ ငွေသွင်းငွေထုတ် မှတ်တမ်းများကိုလည်း ပုံမှန်ရှင်းလင်းသွားမည် ဖြစ်သည်.
HappyLuck သည် သင့်အကြောင်း, ကိုယ်ရေးအချက်အလက်, ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာရပ် နှင့်အခြားကောက်ယူထားသော အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ရန် ကြိုးစားထားပြီး စည်းမျဉ်းထဲတွင်မပါရှိသော HappyLuck မှအပ အခြားမည်သူကိုမျှဝေမျှသွားမည် မဟုတ်ပါ. သင်သည်လည်း သင့်အချက်အလက်များကိုကာကွယ်ရာတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်. HappyLuck လျှို့ဝှက်နံပါတ်သည် လျှို့ဝှက်အချက်အလက်ဖြစ်ပြီး အခြားသူများနှင့် ဝေမျှခြင်းမပြုရန် ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုပါသည်.
သင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို အသုံးပြုမှုနှင့် သိမ်းဆည်းမှု
HappyLuck အားသင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပေးသောအခါ မည်သို့အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းကို သင့်အားပြောပြရန် ဉပဒေအရ တာဝန်ရှိသည်. လုံလောက်သောအချက်အလက်များကိုကောက်ခံမည်, ထို့ပြင် မည်သို့အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြမည် (သင့်ထံမှ အချက်အလက်များကိုတောင်းခံသည့် အခါ မည်သည့်အတွက်ဖြစ်ကြောင်းသက်ဆိုင်ရာ စာမျက်နှာတွင် အကြောင်းကြားမှုကို တွေ့နိုင်သည်) အခြားသူများအား ထိုအချက်အလက်များကို ဝေမျှလိုခြင်းရှိမရှိ မေးမြန်းမည်ဖြစ်သည်.
သင့်အချက်အလက်အား အသုံးပြုရသည့် အချက်များ၏ ရည်ရွယ်ချက်များမှာ
သင့်အားခွဲခြားရန်နှင့် အခြားကိုင်ဆောင်ထားသော အခြားအကောင့်များမှ ကွဲပြားရန်
လိမ်လည်ခြင်းများ ကာကွယ်ရန်နှင့် ထောက်လှမ်းရန်
ဤဆိုဒ်၏ ပြောင်းလဲမှုများအား အသိပေးရန်နှင့် သင့်အား သက်ရောက်မှုရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများကို အသိပေးရန်
အောက်ပါတို့ကိုသုံးရန်သင့် သဘောတူညီချက်ကိုရုတ်သိမ်းရန်နှင့် ငြင်းပယ်ရန်အခွင့်အရေးရှိသည်.
ဆက်လက်၍ စာများလက်ခံရယူနိုင်ရန်ရွေးချယ်ထားမှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ဆောင်မှုအား ဆောင်ရွက်ရန် အတည်ပြုခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့ဝန်ဆောင်မှုအား စစ်တမ်းကောက်ယူမှုတွင် ပါဝင်ရန် သင့်အားဖိတ်ကြားခြင်း (ပါဝင်မှုသည် သင့်သဘောအလျောက်သာ ဖြစ်သည်)
ယေဘုယျအားဖြင့် သင့်အချက်အလက်များအာ HappyLuck တွင်သာ အသုံးပြုမည်ဖြစ်သည်; သို့ရာတွင် တခါတရံ အချက်အလက်များအတွက် third party များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်. ကျွန်ုပ်တို့ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသော third parties များကိုသာ လိုအပ်ပြီး ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးရည်ရွယ်ချက်အတွက် အသုံးမပြုမည့် အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်.
သင့်ကိုယ်ရေး အချက်အလက်ကို ကာကွယ်မှုအတွက် တိုင်းတာရန် နည်းပညာနှင့် အဖွဲ့အစည်းစည်းမျဉ်းများ အသုံးပြုမည် ဖြစ်သည်, ဉပမာ :
သင့်အကောင့်သို့ဝင်ခွင့်ရမှုသည် လျှို့ဝှက်နံပါတ်နှင့် အသုံးပြုသူအမည်တို့ဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားပါသည်
သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို လုံခြုံသောဆာဗာပေါ်တွင် သိမ်းဆည်းထားသည် သို့သော် အင်တာနက်သည် အလုံးစုံလုံခြုံသောနေရာမဟုတ်ကြောင်း သတိပြုရန်လိုပါသည်, ထို့အတွက်ကြောင့် သင့်ထံမှ လက်ခံရရှိသော သို့ အင်တာနက်မှ ရသော မည်သည့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်၏ လုံခြုံမှုကိုမျှ အာမမခံနိုင်ပါ.
သင့်အချက်အလက်များအား မည်သူရရှိသနည်း ?
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော ဉပဒေဆိုင်ရာ ထုတ်ဖော်ချက်များအပြင် သင့် ကိုယ်ရေးအချက်များကို ဝန်ထမ်းများ, HappyLuck နှင့်သက်ဆိုင်သော company များမှ ဝန်ထမ်းများ နှင့် HappyLuck အသုံးပြုသူဖြစ်လာစေရန် ဝန်ဆောင်မှုပေးသော သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို အသုံးပြုသည့် third party ဝန်ဆောင်မှုပြုသူများကို၎င်း မြင်သာစေမည်. Third Party ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများဟာ databases (public or private) ကို ၎င်းတို့အခွင့်ရထားသည်အထိ စစ်ဆေးပေးမည်ဖြစ်ပြီး ထိုသို့ကြည့်ရှုများသည် မှတ်တမ်းကျန်ရှိမည်ဖြစ်သည်.
Third party များထံမှလဲ သင်နှင့်ပတ်သက်သော ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ရယူမည်ဖြစ်သည်. ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးသော အချက်အလက်များကို သုံးရန်, မှတ်တမ်းရယူရန် နှင့် ထိန်းသိမ်းထားရန် သင်သဘောတူညီထားသည်, သို့မဟုတ် third party ဝန်ဆောင်မှုများမှ ထိုကဲ့သို့အချက်အလက်များကို အသုံးပြုရန် သဘောတူထားသည်. သင့်HappyLuck အသင်းဝင်အကောင့်ကို ကျွန်ုပ်တို့ဖက်မှ အချိန်မရွေး ရပ်ဆိုင်းရန် ပိတ်ပစ်ရန် third party ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းမှ ရရှိသောအချက်များပေါ်မူတည်၍ ဆောင်ရွက်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်.
အရည်အသွေး အာမခံ, လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုကို ကာကွယ်ရန်နှင့် လိုက်နာရန် ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် သင်နှင့်ပတ်သက်သော ဆက်သွယ်မှုများ (ဖုန်း နှင့် အီးမေးလ်) ကို စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် မှတ်တမ်းရယူနိုင်သည်.
သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့နဲ့ စီးပွားရေးတွဲဖက်များနှင့် ဝေမျှနိုင်သည် သို့ သင့်အား အီးမေးလ်, ဖုန်း, စာတိုများဖြင့် ထုတ်ကုန်များအကြောင်း ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ပရိုမိုရှင်းများ နှင့် အထူးကမ်းလှမ်းမှုများအကြောင်း ဆက်သွယ်လာနိုင်သည်, မဆက်သွယ်ရန်လည်း သင် ကြိုတင်တားမြစ်နိုင်သည်.
www.Happy8Luck.com အားဝင်ရောက်သောအခြား ယာယီ cookies ကိုသင့်အား ပို့နိုင်သည်. Cookies ဆိုသည်မှာ ဝက်ဆိုဒ်အားနောက်အကြိမ်ဝင်ရောက်သောအခါ မှတ်မိနေမည့် သင့်ကွန်ပြူတာဖိုင်အတွင်းရှိ cookie file ဖြစ်ပြီး စာကြောင်းများဖြင့်အချက်အလက်များကို ထားထားသည်. ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး အချက်အလက်များကို ထို cookies မှ ယူဆောင်မည်. သင့် browser setting မှနေ၍ ထိုcookies အား လက်ခံရန်မလိုသောအခါ ဖယ်ရှားနိုင်သည်.
HappyLuck ၌ အကောင့်ဖွင့်သောအခါ, ဤမူဝါဒကိုသင်လက်ခံသည်. ဤမူဝါဒအား အဆင့်မြှင့်နိုင်ပြီး မကြာခဏ ကြည့်ရှုရန် တိုက်တွန်းပါသည်. မူဝါဒပြောင်းလဲလျှင် ဤစာမျက်နှာ၌ ပြောင်းလဲမှုကိုဖော်ပြပါမည်. HappyLuck ၏ဝန်ဆောင်မှုကို ဆက်လက်သုံးစွဲပါက မွမ်းမံထားသော သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ထားသော စည်းကမ်းချက်များကို လက်ခံသည်ဟု မှတ်ယူလိမ့်မည်. ဤစည်းကမ်းချက်များနှင့် HappyLuck ၏တိကျသောဒေသသုံး စည်းမျဉ်းများအကြား ပဋိပက္ခတစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပေါ်လာပါက နောက်ပေါ်ပေါက်လာသော စည်းမျဉ်းသည် အမှန်ဖြစ်သည်.
ဂုဏ်သိက္ခာရှိပြီး တာဝန်ခံမှုရှိသော bookmaker အနေဖြင့် သင့်အား အကောင်းဆုံးသော ဝန်ဆောင်မှုများပေးရန် ကတိပြုပါသည်. လောင်းကစားခြင်းတွင် မကောင်းသောအမူအကျင့်များအား ကာကွယ်ရန်အတွက် အရေးကြီးသော စာများကိုရှေးဦးစွာဖတ်ရှုရန် တိုက်တွန်းပါသည်.
ကျွန်ုပ်တို့၏ အသင်းဝင်များအား လောင်းကစားခြင်း၌ အလွန်အကျူးဖြစ်လာပါက အပြုအမူများကို ထိန်းသိမ်းရန် အကြံပြုပါသည်. “Gambler Anonymous” မှအကြံပြုထားသော ဖြစ်လာနိုင်သည် အလောင်းကစား ပြဿနာများအတွက် မေးခွန်းများဖြစ်ပါသည်.
လောင်းကစားခြင်းကြောင့် သင့်အလုပ်ချိန်များ လုံလောက်မှုမရှိခြင်း ဖြစ်ဖူးပါသလား?
လောင်းကစားခြင်းကြောင့် သင့်ဘဝကြီး မပျော်မရွှင်ဖြစ်ရပါသလား?
အနိုင်ရပြီးနောက်, ထပ်မံကစားပြီး အနိုင်ရလိုပါသလား?
အရှုံးနှင့်ရင်ဆိုင်ရပြီးနောက်တွင် အမြန်ပြန်လာပြီး ဆုံးရှုံးမှုအတွက် ပြန်လည်အဖတ်ဆည်လိုပါသလား ?
ငွေကြေး လောင်းကစားကြောင့် သင်ပိုင်ဆိုင်သော အရာကိုရောင်းချခဲ့ရဖူးသလား?
သာမာန်သုံးငွေတွင် လောင်းကစားငွေအား အသုံးပြုရန်တွန့်ဆုတ်ဖူးပါသလား?
သင်ကြံရွယ်ထားသည့် အချိန်ထက် ပို၍ လောင်းကစားခြင်း ပြုခဲ့ဖူးပါသလား?
စိတ်ပူပန်မှုနှင့် ပြဿနာများမှ လွတ်မြောက်ရန် လောင်းကစားပါသလား?
နာရီအနည်းငယ်လောင်းကစားပြီးရလာသော ငွေအမြောက်အမြားကို အောင်ပွဲခံဖို့ စိတ်အားထက်သန်ဖူးပါသလား
မေးခွန်း ၇ခု အနည်းဆုံးကို Yes ဟုဖြေဆိုထားပါက သင့်တွင် လောင်းကစားနှင့် ပတ်သက်သော အလွဲသုံးစားပြုမှုဖြစ်ရန် အခွင့်အလမ်းများနေပါသည်. မိသားစု နှင့်ကျွမ်းကျင်အကူအညီပေးသူများထံမှ အကူအညီတောင်းပါ.
Gamblers Anonymous သည် လောင်းကစားနှင့်ပတ်သက်သော အပြုအမူများနှင် အခြား လောင်းကစားသမားများကို ကူညီရန်ဖွဲ့စည်းထားသော အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်သော အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်. ဒေသဆိုင်ရာပညာတော်သင်ဆုများလည်း ကမ္ဘာအနှံ့ရှိသည်. တရားဝင် ဝက်ဆိုက်ဒ် ကို www.gamblersanonymous.org တွင် ကြည့်နိုင်သည်.
Gambling Therapy သည် လောင်းကစားကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့ရသော မည်သူကိုမဆို ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် အားပေးခြင်းများပြုပေးသည်. www.gamblingtherapy.org တွင်ကြည့်နိုင်သည်.
ဤဝက်ဆိုဒ်ကိုသုံးရန် သင်သည်အနည်းဆုံး ၁၈နှစ် သို့ ထိုထက်ပိုကြီးရမည်. အသက်၁၈အောက် မည်သူမဆို ကစားရန် အကောင့်ဖွင့်ခြင်းသည် တရားမဝင်ပဲ ထိရောက်စွာကိုင်တွယ်မည် ဖြစ်သည်.
အကယ်၍ သင်သည် အသက် ၁၈ နှစ်အောက် ဖြစ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့ ဂိမ်းအား မကစားပဲ ချက်ချင်းထွက်ခွာပါ. ၁၈ နှစ်အောက်မည်သူမဆို ဝင်ရောက်ကစားသည်ဟု တွေ့ရှိပါက အနိုင်ရဆုကြေးများကို ပြစ်ဒဏ်အဖြစ်သိမ်းယူမည် ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်သို့ အကြောင်းကြားသွားမည် ဖြစ်သည်.
အောက်ပါဆိုဒ်များမှာ ငယ်ရွယ်သူများအားအွန်လိုင်းဂိမ်း တားမြစ်ထားသည့် ဉပမာ များဖြစ်သည်.
ဆယ်ကျော်သက်များအား လောင်းကစားဆိုဒ်များကို အသုံးပြုရာ၌ ကူညီရန်ဖိတ်ခေါ်သည်. လောင်းကစားဆိုဒ်အနေဖြင့်, ICRA နှင့်စာရင်းသွင်းထားသည်. အကယ်၍ သင့်ကွန်ပြူတာအား မိသားစု အတွင်းရှိ အသက်ငယ်ရွယ်သူများနှင့် ဝေမျှ အသုံးပြုပါက ကျေးဇူးပြု၍ www.icra.org. ကို ကလစ်နှိပ်၍ စာရင်းသွင်းပါ. ပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျေးဇူးပြု၍ NetNanny သို့ Cyberpatrol တို့ကို ရှာဖွေ၍ မှီငြမ်း ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်.